Mampitandrina ny World Tourism Network: Aza manimba ny tsenan'ny Travel Luxury!
Home » Lahatsoratra farany farany » Associations News » Mampitandrina ny World Tourism Network: Aza manimba ny tsenan'ny Travel Luxury!
Associations News • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Hospitality Industry • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Tourism • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao • WTN
Nambara ny ho avin'ny fitsangatsanganana an-dàlana taorian'ny COVID
Ny fizahan-tany dia mifototra amin'ny famoronana fahatsiarovana ary ny fahatsiarovana dia avy amin'ny traikefa miavaka sy mambabo. Raha ahena ho amin'ny serivisy fitsangatsanganana ara-toekarena ny fitsangatsanganana kilasy voalohany taona vitsivitsy lasa izay fa amin'ny vidiny avo kokoa, dia tsy tokony ho gaga ireo matihanina fitsangatsanganana rehefa tsy misy intsony ny fandraharahana.
Hatramin'ny nandravan'ny valan'aretina Covid ny indostrian'ny fizahantany dia nitady fomba hamerenana ny fatiantoka ara-bola ny mpitarika azy.
Ny sasany ao amin'ny indostria dia nampiakatra ny vidiny, ny hafa nampihena ny entana sy ny serivisy, matetika manome tsiny ny fisondrotry ny vidim-piainana, ny tsy fahombiazan'ny rojo famatsiana, ny tsy fahampian'ny mpiasa mahay, na ny Covid-Pandemic.
Ny World Tourism Network dia mahatakatra fa ireo olana voatanisa etsy ambony dia tena olana.
Dr. Peter Tarlow, filohan'ny World Tourism Network, ary manam-pahaizana manokana momba ny dia sy ny fiarovana ary ny fiarovana ny fizahantany eran-tany dia manazava hoe:
Ireo olana ireo, na izany aza, dia an'ny indostria ary tsy mahasoa ho an'ny indostria mitady ny hiverenany amin'ny sisin'ny loza ny mampiasa matetika tsy dia misy fialan-tsiny amin'ny fandoavana ny fitsangatsanganana lafo vidy fa matetika manome vola lany lavitra noho izay mety ho azo. manantena.
The Tambajotra fizahan-tany manerantany, misolo tena ny firenena sy ny orinasam-pizahantany any amin'ny firenena 128, dia mamporisika ny mpikambana ao aminy hiasa amin'ny fanarenana ny fizahantany amin'ny fomba izay tsy hieritreretan'ny mpanjifany teo aloha ny "andro tsaran'ny fitsangatsanganana" fotsiny fa hiandrandra ny ho avy izay hahafinaritra sy hakanton'ny dia. avadiho ho tsy hay hadinoina ny zava-drehetra.
Ao anatin'ny vanim-potoana fanarenana ny indostrian'ny fitsangatsanganana sy fizahan-tany dia tsy afaka mahita ny fihenan'ny kalitaon'ny vokatra na ny serivisy omeny. Ny fihenan'ny kalitaon'ny vokatra sy ny serivisy atolotra toy izany dia hanimba ny indostrian'ny fizahan-tany amin'ny farany, ary amin'ny farany dia ho very vola ny mpitarika azy.
Raha te hahomby amin'izao fotoan-tsarotra izao ny indostrian'ny fitsangatsanganana sy fizahan-tany, dia tsy maintsy manao mihoatra noho ny fiheverana ny tenany ho toy ny niharam-boina izy na tsy afaka mamadika ny mpanjifany mandoa vola ho iharan'ny serivisy ratsy sy ny kalitaon'ny vokatra.
Rehefa lasa manahirana ny fitsangatsanganana, rehefa lasa asan'ny fitsangatsanganana ny fialam-boly amin'ny dia dia tsy misy ny gimmicks momba ny fifandraisana amin'ny besinimaro na ny varotra ho afaka hanarona ny fahadisoam-panantenana. Raha tsy tanteraka kosa ny fampanantenana dia hiatrika krizy azo itokisana ny indostrian'ny fizahantany.
Sady naïve no tsy mahalala ny vahoaka mandehandeha ary rehefa mihena na mihena ny kalitaon'ny serivisy sy ny vokatra dia hahita toerana vaovao vonona hanome tolotra sy vokatra avo lenta amin'ny vidiny mora ny mpandeha.
Noho izany antony izany, ny World Tourism Network dia mandrisika ny indostria:
Mila manolotra serivisy mifanaraka amin'ny vidiny niova ny toerana ipetrahana. Tsy afaka manambara ny trano fandraisam-bahiny iray fa hanadio efitrano indray mandeha ao anatin'ny telo andro. Raha manefa vidiny mihaja dia manolotra serivisy mihaja. Raha tsy ahena ny vidiny!
Miverena ary mamorona tombon-tsoa vaovao. Ny fanomezana gazety maimaim-poana, na sôkôla tsara alina manokana dia mamadika ny fijanonan'ny mpandeha an-tongotra ho fijanonana manokana sy tsy hay hadinoina.
Ny marina ho an'ny indostrian'ny trano fandraisam-bahiny dia marina ihany koa ho an'ny indostrian'ny fiaramanidina. Raha toa ka lasa fiara fitateram-bahoaka any an-danitra ny zotram-piaramanidina, na dia amin'ny kilasy voalohany na fandraharahana aza, dia hahita safidy hafa ny mpandeha amin'ny farany. Amin'izao androntsika izao, ny raharaham-barotra dia azo atao saika tsy misy manahirana sy lafo kokoa.
Mila manafoana ny firafitry ny sarany a la carte ny zotram-piaramanidina., Mila asehon'izy ireo amin'ny besinimaro fa tsy miraharaha fotsiny izy ireo rehefa mitady fanampiana avy amin'ny governemanta fa mandritra ny fotoana mahafinaritra.
Ny orinasam-pizahantany sy ny fitsangatsanganana dia mila mamolavola ora mora ampiasaina ho an'ny mpandeha. Ny fidirana amin'ny hotely amin'ny 4 ora tolakandro ary hivoaka amin'ny 11:00 dia adala rehefa tsy feno tanteraka ny hotely. Ny politika toy izany amin'ny farany dia lafo kokoa noho ny dokam-barotra lafo vidy izay manome fampanantenana izay manjary mamitaka amin'ny farany.
Amboary ny kalitaon'ny vokatra atolotra ary ataovy taratry ny vidin'ny vidiny ireo vokatra ireo. Raha misy trano fandraisam-bahiny na trano fisakafoanana manefa ny sarany ambony dia ny kalitaon'ny sakafo aroso dia tokony haneho izany sara izany. Betsaka loatra ny trano fisakafoanana hotely nanapaka an-joron-trano nefa manefa vidiny ambony. Ny fehin-kevitra dia ny hoe rehefa lasa fantatry ny vahoaka bebe kokoa ny hantsana eo amin'ny vidin'ny varotra sy ny kalitao ary mety manomboka mihena ny laza.
Aza mampanantena izay tsy azonao omena. Tany amin'ny faramparan'ny taonjato farany, ny indostrian'ny fizahantany sy ny fizahantany dia niady mba hamerenana ny fahamendrehany. Avy eo ny 9-11 dia nahatonga ny vahoaka hiombom-pihetseham-po amin'ny filan'ny indostria. Tamin'ny faran'ny folo taona voalohany tamin'ny taonjato faha-roapolo dia nandany izany fiaraha-miory izany ny indostrian'ny fitsangatsanganana sy fizahan-tany. Nahazo sitrapo sy fahatakarana tsara indray ny fitsangatsanganana sy ny fizahan-tany nandritra ny taona Covid. Fotoana izao hamadihana izany finiavana tsara izany ho hetsika ary hanehoana amin'ny besinimaro fa mankasitraka ny mpanjifany sy ny mpanjifany ny indostrian'ny fitsangatsanganana sy fizahan-tany amin'ny famoronana vokatra vaovao sy zava-baovao amin'ny vidiny izay taratry ny zava-misy.
Ny endrika marketing tsara indrindra dia vokatra tsara sy serivisy tsara aseho amin'ny ambiansy mahafinaritra sy azo antoka ary azo antoka. Raha manaraka ny sasany amin'ireo soso-kevitra fototra ireo ny fitsangatsanganana sy ny fizahan-tany dia ho lasa lehibe indray ny indostria lehibe indrindra eran-tany.
Ny fampahalalana bebe kokoa momba ny World Tourism Network sy ny maha-mpikambana dia mandehana amin'ny www.wtn.travel